IBlueBorne, umngcipheko ochaphazela ngaphezulu kwezixhobo ezizigidi ezingama-5.000 kwihlabathi liphela | Iindaba zeGajethi
Siphila kwixesha apho kubonakala ngathi nabani na onolwazi olwaneleyo angasihlasela nanini na kwindawo yokuhlala kunye nokungaziwa kwinethiwekhi kwaye ebe zonke iinkcukacha zethu, kwaye ke, wophula ubumfihlo. Ye 'yongeza ipetroli emlilweniKule veki sidibana nalowo ubiziweyo IBlueBorne, ukusilela okubaluleke kakhulu kweenkqubo zeBluetooth ezishiya unxibelelwano lwakho lusemngciphekweni wokuhlaselwa nangayiphi na indlela yokugenca.
Le mpazamo yezokhuseleko ifunyenwe yinkampani Zomkhosi Kwaye, ngaphambi kokuba uqhubeke, yenze icace gca ukuba inokuchaphazela nasiphi na isixhobo onokuyisebenzisa kwaye inolu hlobo lonxibelelwano, sithetha ngalo naluphi na uhlobo lweelaptop, ikhompyuter yedesktop, iselfowuni, iitafile kunye nalo naluphi na uhlobo lwegajethi okanye isixhobo onaso kwikhaya lakho elilumkileyo kwaye unolu khetho lokuphucula unxibelelwano.
1 IBlueBorne ivumela umntu ukuba athathe ulawulo lweselfowuni, ithebhulethi, ilaptop ...
2 Yeyiphi indlela yeBlueBorne yokusebenza?
3 Ngaba sikhona isixhobo esingasengozini kuhlaselo lweBlueBorne?
IBlueBorne ivumela umntu ukuba athathe ulawulo lweselfowuni, ithebhulethi, ilaptop ...
Ukuya kwinkcukacha ezithe kratya, njengoko kuchaziwe yiArmis, obu bungozi bubhaptizwa ngegama elithi BlueBorne bunobunewunewu obuchaza ukuba, ngokungafaniyo nezinye iindlela ezininzi zokuhlasela, ngeli xesha umhlaseli ayifuni ukuba usebenzise isixhobo esithile ukuze ihlaselwe ukusukela ngokoqobo, okanye ubuncinci yindlela ekubhengezwe ngayo, banokulawula esi sixhobo ngaphandle komzamo omkhulu, ngaphandle kwesidingo sokuba uqhagamshele kwiwebhusayithi, okanye ubhangane nesinye isixhobo okanye nantoni na enjalo.
Ngokusisiseko ekuphela kwento umhlaseli afuna ukuyilawula ngesixhobo esithile kukuba ine I-Bluetooth ivuliwe. Nje ukuba umhlaseli afikelele kwaye athathe ulawulo, unokufezekisa ngokugqibeleleyo, njengoko kubonisiwe ziingcali ezininzi zokhuseleko, aqala ukwenza njalo usulele zonke izixhobo ezisebenza ngeBluetooth ngaphakathi kuluhlu lwazo ke i-malware iya kuqala ukusasazeka ngaphandle komsebenzisi oyaziyo.
Njengeenkcukacha, nangona inyani ndingazi nokuba ingayi kuba yiyo nayiphi na induduzo, ndikuxelele ukuba inkampani efumanise oku kusilela kwiinkqubo zeBluetooth sele iqhakamshele abavelisi abachaphazelekayo ukuze baqale ukuphuhlisa uhlobo oluthile isisombululo.
Yeyiphi indlela yeBlueBorne yokusebenza?
NgokweArmis uqobo, indlela umntu anokuthi angene ngayo kwifowuni yakho, umzekelo, ngokuyilawula, oko kukuthi, banokufikelela kwiifoto zakho, bavule usetyenziso, bafake nantoni na abayifunayo ... ilula njengesoftware leyo ibhaqa zonke izixhobo ezineBluetooth esebenzayo ngeenxa zonke. Nje ukuba olu luhlu uhambise nganye nganye ubanyanzela ukuba banikezele ngolwazi malunga nabo, ulwazi olukuvumela ukuba ukwazi qhagamshela kwaye ulawule isixhobo esithile.
Kuyabonakala ukuba, eyona ngxaki iphambili kuqhagamshelo lweBluetooth kunye nesizathu sokuba iBlueBorne ibe namandla kwaye ibaluleke kakhulu kuthotho lwezinto ezisengozini IProtokholi yeNethiwekhi yeBluetoothOko kukuthi, inkqubo evumela ukuba sabelane ngoxhumano lwe-intanethi ngeBluetooth. Obu bungozi, njengoko kubonisiwe, kuvumela iBlueBorne ukuba ibangele inkohliso yenkumbulo, iyivumele ukuba yenze ikhowudi kwisixhobo, ikunike ulawulo olupheleleyo.
Ngaba sikhona isixhobo esingasengozini kuhlaselo lweBlueBorne?
Kuyinyani zininzi izixhobo ezingakhuselekanga kuhlaselo lolu hlobo lwe-malware nangona, ngelishwa, ngokuqinisekileyo ingeyethu, phantse zonke, ukuba zinjalo. Ngokweemvavanyo ezenziweyo, iqela lokhuseleko leArmis likwazile ukulawula uninzi lwee-Android, iiLinux, izixhobo zeWindows kunye neepad ezininzi, i-iPhone, iPod Touch okanye iApple TV.
Ngalo lonke eli xesha, kufuneka ndibonise ukuba uArgus waqala ukwazisa iinkampani ezithile ngo-Epreli walo nyaka, zininzi iinzame ezityaliwe ukuzama ukusombulula le ngxaki yezokhuseleko. Umzekelo esinawo eApple osele ubhengezile ukuba iinguqulelo zamva nje zeenkqubo zokusebenza zawo bezingakhuselekanga okanye iGoogle, iMicrosoft kunye neLinux ebisebenza kwizisombululo ezahlukeneyo ixesha elide.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » software » IBlueBorne, umngcipheko ochaphazela ngaphezulu kwezixhobo ezizizigidi ezingama-5.000 kwihlabathi liphela